musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii ndiyo inoshungurudza nyika yeUS kugara
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Entertainment • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Hawaii ndiyo inoshungurudza nyika yeUS kugara.
Paavhareji mutengo wemba weHawaii i$1,293,301, yechitatu yepamusoro-soro muUS, ukuwo iine mitengo yepamusoro yekuroja muAmerica, pamadhora zana nemakumi matatu nenomwe pamwedzi. Nekuda kweizvozvo nyika ine 1,327th yakaipisisa zvibodzwa zvekunetsekana kwemari, izvo padivi pemakumi mana nesere zvibodzwa zvakanyanya zvezvakatipoteredza zvakaita semamiriro asina kunaka emigwagwa mikuru uye kuve yechipiri nyika ine ruzha, zvakaita kuti Hawaii ive iyo inoshungurudza zvakanyanya muUS.
Hawaii yakaverengerwa seyakanyanya kunetsa nyika muUS, ichipinda seimwe yenzvimbo dzakaipisisa dzemari uye kushushikana kwakabatana kwezvakatipoteredza.
Florida inoverengerwa senyika yechipiri inonyanya kunetsa muUS, ichiratidza hurombo hwemari, basa, hutano, uye kushushikana kwezvakatipoteredza.
Vermont ndiyo nyika isinganetseki, inomira seyechipiri isinganyanyi kunetseka kune ese ari maviri ehutano uye kwezvakatipoteredza zvine chekuita nekushushikana.
Hawaii yakaverengerwa senyika inoshungurudza zvakanyanya muUnited States of America.
Nyanzvi dzekurara dzakaita tsvakiridzo kuti iwane iyo US inonyanya kunetsa yekugara mairi, zvichibva pakuongorora 22 dzakasiyana-siyana dzekushushikana zvine chekuita nebasa, mari, hutano, uye nharaunda. Chidzidzo ichi chakawana kuti Hawaii ndiyo inonyanya kunetsa nyika, uye Vermont ndiyo idiki.
Nyika dzakawana zvibodzwa kubva pagumi pachinhu chimwe nechimwe, zvinosanganisira mitengo yemba nerendi, mari inotambirwa, mitengo yekuora mwoyo, kurovedza muviri, kurara, kuwana nzvimbo dzakavhurika, uye ruzha.
Hawaii pamusoro pechinyorwa mushure mekumaka zvakanyanya zvakanyanya kune mari uye kunetsekana kwezvakatipoteredza. Mutengo wepamba wehurumende i$1,293,301, yechitatu yepamusorosoro muUS, ukuwo iine mitengo yepamusoro yekuroja muAmerica, pamadhora zana nemakumi matatu nenomwe pamwedzi. Nekuda kweizvozvo nyika ine makumi mana nepfumbamweth yakaipisisa chibodzwa chekushushikana kwakabatana nemari, iyo padivi pe48th yakaipisisa zvibodzwa zvezvakatipoteredza zvakaita semamiriro asina kunaka enzira huru uye kuve yechipiri ine ruzha zvakanyanya, zvinotungamira Hawaii kuve iyo inonyanya kushungurudza mamiriro muUS.
Florida inyika yechipiri inonyanya kunetsa, ichiiswa zvisizvo nekuda kwezvinhu zvakaita sekushaikwa kwemabasa, ne6.5% yehuwandu hwevanhu vanonyoresa sevasina mabasa. Mari yehurumende yakaderera, yakaderera yezvivakwa zvehutano hwepfungwa pamunhu, mapaki enyika nenzvimbo dzakavhurika paskweya mamaira yevhu, uye ruzha rwakakonzerwa. Florida's low ranking.
Kune rumwe rutivi rwechiyero, chidzidzo chakarongwa Vermont seyakanyanya kunetsa mamiriro. Vermont yakashuma hurombo hwakanyoreswa pamunhu, zvichideredza zvakanyanya kunetsa kwemari yenyika. Nyika zvakare ine yechipiri yakanakisa reshiyo yenzvimbo dzekurapwa kwehutano hwepfungwa pamunhu, uye imwe yenzvimbo dzepamusoro dzekusimbisa muviri uye kurara zvakakwana, zvinotungamira kune iyo nyika chinzvimbo chechipiri muhutano hune chekuita nekushushikana kwechikamu-chikamu.
Tim Slear anoti:
Gunyana 25, 2021 pa 19: 32